Jabuuti Oo Si Adag Uga Hadashay Xiisadda Suuriya | Haqabtire News
Jabuuti Oo Si Adag Uga Hadashay Xiisadda Suuriya
April 15, 2018 - Written by Warbaahinta Haqabtire
Jabuuti:-(HTN)Dawladda Jabuuti oo la safan waddamada reer Galbeedka ayaa si adag u cambaaraysay hubka sunta ah ee lagu adeegsaday waddanka Suuriya. Maalmihii u dambeeyay waxa Suuriya isku dul haysta reer Galbeedka iyo xulufada Ruushka. Maraykanka, Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa Sabtidii duqaymo ka fuliyay Suuriya inkasta oo Ruushkuna sheegay in ay gantaallo hawada ku burburiyeen.
Wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti oo bartiisa Twitter-ka arrintan kaga hadlay ayaa dhalliilay codka diidmada qayaxan ee golaha ammaanka iyo nidaamka ka taliya Suuriya ee Bashaar Al Asad “Marar aad u badan ayaa shacabka Suuriya loo adeegsaday hubka Kiimikalka ah 5-tii sanno ee u dambeeyay. Waa dambi bani’aadanimada ka dhan ah. Arrinta waxa masuul ka ah nidaamka Suuriya ka taliya. Duqaymaha Suuriya lagu qaaday ee ka dhanka ah Nidaamka Suuriya ka taliya waa kuwo cudur daar loo helayo,” Sidaas ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti.
“Sawirrada carruurta Suuriya ee neef qabatoobay, qaarkoodna dhulka daadsan yihiin iyaga oo naftu ka baxday sinaba cudur daar loogu heli maayo si loo bedelo nidaamka Suuriya.Cidna indhaha kama qarsan karto masiibada bani’aadanimo,” Sidaas ayuu yidhi wasiir Maxamuud Cali Yuusuf.
Geesta kale waxa uu dhalliilay codka diidmada qayaxan ee ay inta badan waddamada qaarkood ku hor istaagan qaraarrada golaha kaas oo Ruushku ku xannibayo go’aammada ka dhanka ah Xukumadda Asad “Dib u habaynta golaha ammaanka iyo guud ahaan hannaanka Qaramada Midoobay wuxuu noqonaya lagama maarmaan. Awoodda diidmada qayaxan(Veto Power) waa mid burbur ku ah dadaallada caalamiga ah ee dunida nabadda lagaga dhalinayo,” Sidaas ayuu yidhi wasiiru khaarajiga Jabuuti.
Dawladda Jabuuti ayaa dunida saamayn ku leh maaddaama ay hoy u tahay saldhigyo door ah oo u badan kuwa reer Galbeedka, inkasta oo saldhigga Shiinaha ee dhawaan la furay walwal weyn ku abuuray reer Galbeedka.
Hadalka wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti ayaa imanaya xilli bishii u dambeysay warbaahinta iyo fagaareyaal siyaasadda caalamka falanqeeya si weyn u qaada dhigayeen in dawladda Ruushku Saldhig Militari ka furanayso magaalada Saylac ee Somaliland oo u dhaw Jabuuti. Wararkaasi oo si weyn isu soo taray ayuu wasiirka arrimaha dibadda Somaliland beeniyay halka aan dhanka Ruushka wax faallo ah laga hayn.
Wararka ayaa sheegayay in Ruushku saldhigga dhaafsanayo citiraaf uu Somaliland siiyo iyo maalgalin uu ku sameeyo soo saaridda shidaalka Somaliland, waxaana si weyn looga faallooday saamayntiisa haddii awooddiisu ku soo noqoto Geeska Afrika oo lagu tilmaamay in ay noqon doonto albaabka uu Afrika ka soo galayo mar kale Ruushku.